महेश बाबूको पारिश्रमिक २० करोड, सम्पती कति ? - Narayanionline.com
१८ दिनपछि बस्ने गरी प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित
महेश बाबूको पारिश्रमिक २० करोड, सम्पती कति ?
तेलगु फिल्म इन्डष्ट्रीका चर्चित अभिनेता, जो विना तेलगु फिल्म जगतलाई अधुरो सम्झिने गरिन्छ – महेश बाबू । सन् १९७५ अगष्ट ९ मा चेन्नई, तमिलनाडुमा जन्मिएका उनको फिल्मी सफर बाल्यकालदेखि नै सुरु भएको थियो । तर, उनलाई २००३ मा आएको ‘ओकाडू’ बाट सफलता मिल्यो, जसमा उनले कबड्डी प्लेयरको भूमिका निर्वाहा गरेका थिए ।
यो फिल्मको सफलतापछि उनले आफ्नो करिअर कहिल्यै पछाडि फर्किएर हेर्नु परेन । बरिष्ठ तेलगु अभिनेता कृष्णाका छोरा महेशले सन् १९७९ मा आएको फिल्म ‘नीदा’ मा एक बाल कलाकारको भूमिका निर्वाहा गरेका थिए । यसपछि उनको ८ फिल्म आयो, जसमा उनले बाल कलाकारकै रुपमा काम गरे ।
सन् १९९९ मा ‘राजकुमरुदु’ बाट उनले पहिलो पटक मुख्य अभिनेताको रुपमा अभिनय गरेका थिए, जसका लागि उनले सर्वश्रेष्ट अभिनेताको पुरस्कार हात पारे । महेश बाबुले ‘मुरारी’, ‘ओकाडू’, ‘अथाडू’, ‘पोकिरी’, ‘नेनोक्कडीने’, ‘श्रीमंथुडु’, ‘दूकुदु’, ‘व्यापारी’, ‘सीतम्मा वकितलो सिरिमले चेत्तु’ जस्ता दर्जनौं फिल्ममा काम गरेका छन् ।
आफ्नो अभिनयद्वारा उनी अहिलेसम्म सात नन्दी पुरस्कार, पाँच फिल्मफेयर पुरस्कार, तीन सिनेमा पुरस्कार, तीन दक्षिण भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार र एक अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेमेडी पुरस्कारबाट सम्मानित भइसकेका छन् । उनी अभिनेता मात्र होइनन् । उनको आफ्नो ‘जी महेश बाबु इन्टरटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड’ नामको कम्पनी छ ।
उनलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती यो थियो कि, उनी फिल्मी ब्याकग्राउन्डबाट थिए । यही कारण उनीमाथी सुरुबाटै आफूले आफूलाई साबित गर्नु पर्ने दबाब थियो । आफ्नो बुबाको नाम बनाइराख्न र आफूले आफूलाई इन्डस्ट्रीमा साबित गर्न महेश बाबुले निकै मिहिनेत गरेका छन् ।
आफ्नो फिल्म ‘वामसी’ को सुटिङको क्रममा उनको भेट अभिनेत्री नम्रता शिरोडकरसँग भयो । करीब ४ वर्षसम्म यी दुई रिलेशनसिपमा रहे । यसपछि उनीहरुले विवाह गर्ने फैसला लिए । अन्ततः सन् २००५ मा महेश र नम्रता बैबाहिक जीवनमा बाँधिए । यी दुईको एक छोरा र एक छोरी छन् । छोराको नाम गौतम कृष्णा र छोरीको नाम सितारा हो ।
महेश बाबू एक फिल्मका लागि करीब १८ देखि २० करोडसम्म पारिश्रमिक लिने गर्छन् । उनी करीब १२७ करोडको प्रोपर्टीका मालिक हुन् । आकर्षक कार कलेक्सन पनि रहेको उनको हैदराबादमा एक लग्जरी महल छ, जसको मूल्य अहिलेको अवस्थामा करीब ११ करोड भारतीय रुपैयाँ पर्छ ।
भरतमणि पौडेलले जिते ‘कमेडी च्याम्पियन २’को उपाधि
अब ‘सक्किगोनी’ पनि आफ्नै युट्युवमा
मानव अधिकार आयोगको चासोपछि पुग्यो प्रहरी विष्णु माझीको माइतीघर
जनताको सेवा गर्नका लागि पार्टी गठन गरेका छौँ : अध्यक्ष नेपाल
अमेरिकाले बनायो कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप, पहिलो मानव परीक्षण गरियो
एमालेका ४ सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि जोगियो कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार
भारतबाट आउनेलाई राख्न पर्यटन मन्त्रालयले तोक्यो आठ होटल (सूचीसहित)
बैतडीमा जिप दुर्घटना, नौ जना घाइते
सभापति देउवाद्वारा भदौमा पार्टीको महाधिवेशन हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह
कोरोना संक्रमणबाट न्युयोर्क अर्का नेपालीको मृत्यु
कोरोना संक्रमित बेलायती प्रधानमन्त्री आइसियूमा, स्वास्थ्य अवस्था ‘गम्भीर